?ခေါငျးကိုကျခွငျးဟာ အခွားရောဂါတှရေဲ့ လက်ခဏာ တဈခုလား ? – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
?ခေါငျးကိုကျခွငျးဟာ အခွားရောဂါတှရေဲ့ လက်ခဏာ တဈခုလား ?
ခေါငျးကိုကျပုံကိုကျနညျးပေါငျး ၂၀၀ကြျောမက ရှိတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ တခြို့ကတော့ အန်တရာယျမရှိလှပဲ စိတျဒုက်ခပေးရုံလောကျ နရေခကျရုံလောကျဖွဈပမေဲ့ တခြို့ ကတော့ တကယျ့ကို သလေောကျအောငျ ကိုကျတယျလို့ ဆိုရမလို အသကျထှကျမတတျ ကိုကျတာတှလေညျး ရှိပါတယျ။
? ခေါငျးဘာကွောငျ့ကိုကျတာလဲ ??
– အရမျးအေးတာတဈခုခုကို အမွနျစားသောကျမိရငျ
? ရိုးရိုးကိုကျတာလား ရောဂါတဈခုခုကွောငျ့ကိုကျနတောလား ??
ဒီလို ရောဂါတဈခုခုကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျနတောကို secondary headache လို့ချေါပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ကိုကျမှနျးမသိ ကိုကျနရေငျတော့ Primary headache စာရငျးထဲ ဝငျပါမယျ။
? အန်တရာယျရှိတဲ့ secondary headache တှကေ ဘာတှလေဲ ??
– ဦးနှောကျအမွှေးပါးအောကျ သှေးယိုရငျ
– ဦးနှောကျအတှငျးက ဖောငျးနတေဲ့ သှေးကွောတှေ အလိုအလြောကျ ပေါကျကုနျရငျ
– မကျြလုံးအတှငျး ရတေိမျကွောငျ့ ဖိအားမွငျ့လာရငျ
စတဲ့ ရောဂါတှကေ အသကျအန်တရာယျအထိ ရှိနိုငျလို့ သတိကွီးကွီးထားရပါမယျ။
? ဘယျလိုခေါငျးကိုကျရငျ သတိထားရမလဲ ??
– ကိုကျနကေပြမာဏထကျ သိသိသာသာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပိုကိုကျရငျ
– ကိုကျတဲ့ ပုံစံပွောငျးသှားရငျ
– လညျပငျးတောငျ့တငျး နာကငျြနရေငျ
– လှုပျလေ ကိုကျလေ အနအေထားပွောငျးလေ ပိုကိုကျလေ ဖွဈလာရငျ
– ပြို့အနျလြှငျ..ခေါငျးမကိုကျခငျ ရကျရှညျလမြား ကွိုပွီး ပြို့အနျနရေငျ
– နားထငျဘေး သှေးကွောတှပေါနာနရေငျ
– မေးရိုးတှေ တောငျ့တငျးလာရငျ
– မကျြလုံးအတှငျးက နာလာရငျ
– တကျပွီးမှ ခေါငျးကိုကျကနျြနခေဲ့ရငျ
ဒီလိုဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျမွနျမွနျပွဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။
?ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ အခြားရောဂါတွေရဲ့ လက္ခဏာ တစ်ခုလား ?
ခေါင်းကိုက်ပုံကိုက်နည်းပေါင်း ၂၀၀ကျော်မက ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ အန္တရာယ်မရှိလှပဲ စိတ်ဒုက္ခပေးရုံလောက် နေရခက်ရုံလောက်ဖြစ်ပေမဲ့ တချို့ ကတော့ တကယ့်ကို သေလောက်အောင် ကိုက်တယ်လို့ ဆိုရမလို အသက်ထွက်မတတ် ကိုက်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
? ခေါင်းဘာကြောင့်ကိုက်တာလဲ ??
– အရမ်းအေးတာတစ်ခုခုကို အမြန်စားသောက်မိရင်
? ရိုးရိုးကိုက်တာလား ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့်ကိုက်နေတာလား ??
ဒီလို ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် ခေါင်းကိုက်နေတာကို secondary headache လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ကိုက်မှန်းမသိ ကိုက်နေရင်တော့ Primary headache စာရင်းထဲ ဝင်ပါမယ်။
? အန္တရာယ်ရှိတဲ့ secondary headache တွေက ဘာတွေလဲ ??
– ဦးနှောက်အမြှေးပါးအောက် သွေးယိုရင်
– ဦးနှောက်အတွင်းက ဖောင်းနေတဲ့ သွေးကြောတွေ အလိုအလျောက် ပေါက်ကုန်ရင်
– မျက်လုံးအတွင်း ရေတိမ်ကြောင့် ဖိအားမြင့်လာရင်
စတဲ့ ရောဂါတွေက အသက်အန္တရာယ်အထိ ရှိနိုင်လို့ သတိကြီးကြီးထားရပါမယ်။
? ဘယ်လိုခေါင်းကိုက်ရင် သတိထားရမလဲ ??
– ကိုက်နေကျပမာဏထက် သိသိသာသာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပိုကိုက်ရင်
– ကိုက်တဲ့ ပုံစံပြောင်းသွားရင်
– လည်ပင်းတောင့်တင်း နာကျင်နေရင်
– လှုပ်လေ ကိုက်လေ အနေအထားပြောင်းလေ ပိုကိုက်လေ ဖြစ်လာရင်
– ပျို့အန်လျှင်..ခေါင်းမကိုက်ခင် ရက်ရှည်လများ ကြိုပြီး ပျို့အန်နေရင်
– နားထင်ဘေး သွေးကြောတွေပါနာနေရင်
– မေးရိုးတွေ တောင့်တင်းလာရင်
– မျက်လုံးအတွင်းက နာလာရင်
– တက်ပြီးမှ ခေါင်းကိုက်ကျန်နေခဲ့ရင်
ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်မြန်မြန်ပြဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
?လူတိုငျးသိတဲ့ ‘ပါရာစီတမောလျ’ရဲ့ လူသိပျမသိတဲ့ အခကျြတှေ ?